Kilimanjaro ugwu mgbawa: njirimara, geology na usoro | Network Meteorology
Otu ugwu mara amara na omenaala niile a ma ama bu Kilimanjaro. Ọ bụ ugwu mgbawa atọ mebere 3 nwere nke nwere ugwu mgbawa. A na-ahụta nke ọ bụla dị elu ma mara aha Kibo, Mawenzi, na Shira. N'ime ugwu atọ a, Kibo bụ nke kachasị elu. Ọ dị n'Africa ma bụrụ ugwu kachasị elu na kọntinent ahụ dum nke 5.895 mita dị elu karịa ọkwa mmiri. A maara ya dị ka ugwu kachasị elu kachasị elu n'ụwa.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, nhazi na mgbawa nke Kilimanjaro.
2 Mbido Kilimanjaro
3 Ihe mmebi
N’akụkọ ihe mere eme nile, ndị ọkà mmụta ala na ugwu mgbawa na-arụrịta ụka banyere ya ma Kilimanjaro bụ ugwu na-agwụ agwụ ma ọ bụ nke na-ehi ụra. Edeela ya dị ka ụra. Enwere ike ịtụgharị ya dị ka ụra na ọ pụtara ụdị ugwu mgbawa nke gbaputara maka ogologo oge. Agbanyeghị, ọ nwere ike ịme ya n'oge ọ bụla. Nke ahụ pụtara ugwu na-ehi ụra. Ọ pụtara na, ọ bụ ezie na ọ pụtaghị, ọ nwere ike ịme n'oge ọ bụla. Ọ agwụbeghị.
Ugwu na-agbọpụ ọkụ a ka nwere ike ịnụ gas ma ọ bụ ntiwapụ. N’aka nke ọzọ, ugwu mgbawa anaghịzi enwe magma zuru ezu iji nwee ike ịpụ. N'ọnọdụ Kilimanjaro anyị hụrụ Mawenzi na Shira cones dị ka ọnụ ọgụgụ abụọ dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ n'ihi na o nweghịzị ihe magma zuru ezu iji nwee ike ịchụpụ ugwu ahụ. Ka o sina dị, Kilimanjaro n’ozuzu ya ka se weere na ọ naghị arụ ọrụ ka oke Kibo ka na-eku ume gas.
Kilimanjaro dum nwere ugwu stratovolcano ma ọ bụ ugwu mgbawa. Nke a bụ ụdị ugwu ọgbụgba ọkụ mepụtara site na nchịkọta nke ihe dị iche iche na-agba ume. Ihe ndị a bụ ntụ na nchara. Kibo Peak bụ mpi etiti na naanị onye na-arụ ọrụ ugbu a. Gbasara ala anyị, etinyere ya na Tanzania, ihe dị ka narị kilomita atọ na iri atọ site na ndịda Equator ma dịrị nso na Kenya. Ugwu a gbagoro n’elu ndagwurugwu ma otu n’ime ugwu ya kpuchie oke ọhịa nke na-eme ọdịiche dị mma na ahịhịa nile nke ala dị gburugburu.
Ebe ọ bụ na Kilimanjaro dị elu karịa mita 5.000, n'oge oge oyi ọ na-abụkarị ugwu snow. Ọ bụ ebe a ka a na-enye otu n'ime ala mara mma mara mma n'ụwa. Anyị nwere ike ịhụ snow na savanna n'otu ebe. Ugwu a nwekwara otu n’ime ice ndị dị n’elu ya nwere nnukwu ibu, mana ọ na-adalata n’ihi mgbanwe ihu igwe. Kilimanjaro efuola ihe dịka 80% nke oke mmiri ya kemgbe 1912.
Ugwu a dị n’akụkụ ókè otu efere tectonic dị iche iche. Typedị efere tectonic a bụ nke na-ekewapụ mmasị ma nwee ike ikwe ka magma bilie site na mpaghara ndị miri emi. N'ihi ya, e guzobere ugwu mgbawa. A hụrụ ya kpọmkwem na Kilimanjaro na ọgbaghara Ọwụwa Anyanwụ Africa. A maara mpaghara a dị ka mgbaji ọkpụkpụ ebe teknụzụ tectonic nke Africa ji nke nta nke nta kewaa abụọ dị iche iche. A maara ya nke ọma n'ụwa niile n'ihi eziokwu ahụ bụ na etolitere ya na mpaghara ókè ala. N'ebe a na njedebe ndị a, magma na-agagharị site na uwe elu ụwa niile ruo mgbe ọ gbagoro n'elu.
E guzobere Kilimanjaro erughị 1 nde afọ gara aga. Uto a nile kwusiri ihe dika 300.000 afo gara aga. Ihe niile malitere site na ntiwapụ na ọrụ ya nke Shira ihe dịka nde 2.5 gara aga. N'oge Pliocene niile mgbawa ugwu na-eme na-agwụ 1.9 nde afọ gara aga. O ruola mgbe ihe dị ka otu nde afọ gara aga, Kibo na Mawenzi ọnụ malitere ịmalite ihe ndị dị n'ime ime ụwa.
Imirikiti mmepe niile nke Kilimanjaro emeela n'oge Pleistocene. Enwere ike ikpebi ihu igwe nke oge a site na iji ụzọ ụfọdụ dị ka ọmụmụ nke ọkwa nke ọdọ mmiri, mmiri nke osimiri, usoro dune, oke glaciers na ọmụmụ nke pollen. Site na quaternary Enweela afọ iri na isi ice nke emetụtara ọbụna na East Africa. Enwere ike ịchọta ebe jụrụ oyi nke ihu igwe nke mpaghara a na Kilimanjaro.
Ihu igwe na-egosi na osisi niile dị na gburugburu ụwa dịpụrụ adịpụ yana nke ụdị alpine ahụ na ahịhịa na anụmanụ. Ọ pụtara na usoro okike amụbaala ma dị obere karịa na mmalite. Ka oge na-aga, site na mmepe nke ọnụ ọnụ, a gbanwere gburugburu ebe obibi dum na ụdị ndị ahụ ga-edozi.
Ọ bụ ezie na anyị ekwuola na Kibo bụ naanị onye nwere ike ịgbawa, ọ ga-enye otu ụbọchị. Ihe na-agbawa agbawa na-eme na Kilimanjaro Enwere ike ịhụ ya afọ 2.5 gara aga site na Shira cone. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ọ nweghị mgbawa akụkọ ihe mere eme nke ugwu mgbawa a ugbu a. Ihe omume a belatara nke ukwuu, ọ bụ naanị ụfọdụ fumaroles na-agbapụ na ndagwurugwu Kibo. Dịka nsonaazụ nke fumaroles a, ụfọdụ mbuze na mbuze emeela, mana na-enweghị nnukwu mkpa.
Ọfụma nke ikpeazụ nke ugwu mgbawa nwere ike ịbụ ihe dịka 100.000 afọ gara aga. Edeela ihe omume ikpeazụ nke ugwu mgbawa ihe dị ka afọ 200. Ọ bụ ezie na Shira na Mawenzi anwụchaala, ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ugwu a ma ghara iwepụ na Kibo nwere ike ime mgbawa otu ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụghị ugwu mgbawa nwere ụdị egwu ọ bụla, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ oke ala ọ na-enye n'ụzọ zuru oke. Naanị ebe a ka anyị nwere ike ịhụ ọdịiche dị n'etiti snow na savanna.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu Kilimanjaro na njirimara ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kilimanjaro
Ememme ọnwa ọhụrụ